TAMAANDHADA BAALDIYADA, KORAYA HOOS U: KOR U KACA IYO MIRO YAR EE TAMAANDHO KOR U, HOOS SAWIRADA, IYO SIDOO KALE SIDA LOO QODO XAGGA HOOSE IYO WAA SUURTOGAL IN LA SUGO GOOSASHADA? - BEER CAGAARAN
Habka aan caadiga ahayn ee yaanyada sii kordhaya ee baaldiyada hoos u dhacaya: talaabo talaabo talaabo ah iyo qalad suurtagal ah
Dad badan oo ku lug leh beerta ayaa si joogta ah isku dayaya in ay helaan dhammaan noocyada siyaabo badan oo lagu kordhiyo soo saarida alaabta koray iyo fududeeyeen geeddi-socodka beerashada iyo koritaanka miraha. Xaaladdan oo kale, beeritaanka yaanyada - waa wax reeban.
Mid ka mid ah natiijooyinka asalka ah ee degaankaan wuxuu ahaa koraayada yaanyada baaldiyada caadiga ah. Marka ugu horeysa, qaabkani waa mid aan caadi ahayn, laakiin mar hore muddo dheer waa mid caan ah, isaga oo buuxiya booskiisa cusub iyo kuwa cusub.
Dheeraad ah ayaanu u sheegi doonaa in ay suurtagal tahay in ay koraan tamaandhada, oo waxaan ku siin doonaa sawir.
Faa'iidada iyo dariiqooyinka habka soo degidda ayaa kor u kacaya
Hubaal si aad u barato hal ama hab kale oo beerto iyo dhirta sii kordhaya, waxaad u baahan tahay inaad miisaamiso dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaaraha, waxa badanaa - marar ama dalabyada tijaabadan adag.
Tamaandhada ayaa aad ugu nugul weerarrada noocyada kala duwan ee cayayaanka dhulka hoostiisa, gaar ahaan, cayayaankaas oo kale ah sida qoryaha.
Waxaa jira fursada hadda ay ku koraan dhirta sanad walba oo lagu magacaabo "cusbooneysiin" ciidda (sida aad ogtahay, tani waa feejignaan aad u fiican ee cudurada fungal iyo phytophtoras).
Waxaa jira koror la ogaan karo oo wax-soo-saarka beeraha (taas waxaa fududeynaya xaqiiqda ah in ciidda iyo biyaha baaldiyada ku kululaadaan si dhaqso badan, sidaa daraadeed, dhirtu way koreysaa oo waxay sii adkaanaysaa qiyaas degdeg ah).
Yareynta wakhtiga goosashada.
Hawlgallada wanaagsan ee Bacriminta (compost iyo humus) ee diyaarinta isku dhafka dhoobo ee dhulka sababtoo ah hoos u dhac weyn ee mugga loo baahan yahay.
Tamaandhada ku jira weelasha sida baaldiyada waxay ku nool yihiin meel bannaan oo yar, taas oo nolosheeda u sahlanaato bannaanka iyo fursad ay ku beeraan dalagyo badan, iyo sidoo kale waxaad u guurin kartaa baaldiyada sida aad jeceshahay.
Waxyeellada noocan oo kale ah sida cawska ayaa baaba'aya.
Bacriminta si loo hagaajiyo bacriminta si gebi ahaanba hoos ugu dhaco xididada.
Khatarta dhimista infekshannada.
Bannaaneynta tamaandhada waxay ku dhacdaa baaldiyada laba illaa saddex asbuuc ka hor.
Marka biyaha la waraabiyo si toos ah nidaamka xididada dhirta, oo aan ku faafin dusha sare ee ciidda.
Kareemada inta lagu jiro mudada qubeyska dheeriga ah waxaa lagu dhejin karaa saqafka ama loo wareejiyaa meelaha kale ee daboolan.
Caawin Horumarinta yaanyada lafdhabarta ah waa hab aan caadi ahayn oo koraya oo qurxin kara sawirkaaga, mana ubaahnayn garaf joogto ah iyo wax kasta oo gaar ah.
Habkani wuxuu ka dhigan yahay mid aan faa'iido lahayn kuwaas oo:
Kakanaanta sii kordhaysa: waxaad u baahan tahay inaad ku qaadato dadaal aad u badan, sabir iyo shaqo adag ee habkan soo kordhaya yaanyada.
Isticmaal tiro badan oo baaldiyo (taangiyo) aan lahayn hoos.
Dhammaan noocyo yaanyo ah ayaa lagu kori karaa baaldiyada, laakiin kaliya Beelaha iyo noocyada leh caleenta daciifka ah iyo habka xididada cufan (tan waxaa ka mid ah noocyo badan oo yaanyo balkoon).
Nidaamka waraabinta wuxuu u baahan yahay in la sameeyo wax badan oo ka badan tamaandhada lagu beeray dhul furan, sababtoo ah xididada baaldiyada ma heli karaan dhul furan.
Waxaad u baahan tahay inaad dareen gaar ah siiso waraabinta, haddii kale yaanyada si fudud u dhiman karaan. Waa inay si taxadar leh u waraabiyaan, si siman u qaybiyaan xaddiga qoyaanka ee buuxa qoto dheer ee ciidda iyo waqti isku mid ah, ma daadin badan, sababtoo ah yaanyada la baabi'in karaa la'aanta oksijiinta.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato heerkulka, laakiin kaliya haddii baaldiyada beeraha loo doortay madow, madow madow ama mugdi madow. Si rhizomes ah ha kululeynin kuleylka, baaldiyada waa in lagu duuduubay walxaha iftiinka, si joogto ah u foorjiraan iyo lagu buufiyo biyo qabow.
Markaad diyaarinayso agabyada beeritaanka yaanyada, marka hore waa inaad taxadar siisaa:
Baaldiyo midab leh. Waxay u fiicantahay in ay yihiin midabyo fudud, laakiin haddii aysan jirin, marka baaldiyada madow waa in lagu duuduubaa (cad) qalab si markaa rhizomes aysan u kululeyn.
Waxyaabaha balaastiga ah maaha wax muhiim ah oo dhan, waxaa laga samayn karaa caag ama bir ah.
Volume Kalluunku waxay u baahan yihiin inay qaataan mugga ugu yaraan 10 litir.
Tayada Inta badan faa'iido la'aanta iyo gacanta labaad waxay baaldi u muuqdaan, ka sii fiican. Dildilaacyo badan, kala-goynta iyo godadka waxay hagaajiyaan uumiga biyo-xad-dhaafka ah iyo habeynta nidaamka xididka yaanyada. Xaaladda arjiga baaldiyada cusub, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tiro badan oo fasaxyo ah iyo godad hoose iyo geesaha.
Waa muhiim! Wixii habka beeritaanka yaanyada kor u kicin, waxaad u baahan doontaa baaldiyo leh dhexroor god oo hoose ee weelka ku saabsan 5-10 sentimitir.
Abuurka Tomato wuxuu u baahan yahay inuu si fiican u qaboojiyo si uu u doorto midka ugu weyn uguna wacan ka hor inta beeritaanka baaldiyada. Waa suurtagal in la iibsado miraha dukaanka gaarka ah ama si aad uhoreesid naftaada. Si loo dhammeeyo, tan iyo dayrta waa lagama maarmaan in ay ka tagto dhowr ka mid ah yaanyada ugu weyn oo la tufay. Abuurka Sanadkii tagay waxaa ugu wanaagsan ee geedo sii kordhaya.
Marka laga hadlayo isticmaalka miraha la iibsaday, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco taariikhda dhicitaanka.Dhagaajinta ayaa si fiican uga fuqi karta haddii miraha ay ku jiraan nolosha ugu gaaban.
Shinni loo diyaariyey waa in si taxaddar leh loogu tirtiraa laydh iyo lagu daaweeyaa xal of Kansar dhalaanka. Abuurka iibsaday badiyaa ayaa mar horeba loola dhaqmaa sida xal gaar ah.
Waxaad ka baran kartaa wax badan oo ku saabsan diyaarinta abuurka yaanyada abuurka halkan.
Si kor loogu qaado dhalidda ee yaanyada, waxaa ugu wanaagsan in la diyaariyo horay ciid ah khaas ah ee yaanyada. ka hor intaan la dhicin.
Laga bilaabo dayrta waxaad u baahan tahay inaad buuxiso baaldiyada leh humus. Si loo abuuro humus waxaan u baahanahay:
dhulka caadiga ah ee beerta (waxaa fiican in laga qaado sariiraha qajaarka);
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad isku daro qaybaha kor ku xusan oo isku dhejiso baaldiyada. Ma noqon doonto mid macquul ah in lagu daro walxo gaar ah si ay geeddi-socodka ciidda u qaadaan si xoog leh.
Isku darka soo go'ay waa in lagu daadiyaa biyo iyo bidixda oo dhan jiilaalka oo dhan ee baaldiyada ee lagu koriyo.
Waxaa lagu dhigi karaa hab kasta oo haboon ama dhulka loo qodo ilaa qiyaastii 20 sentimitir.
Had iyo jeer u baahan tahay inaad barafka ku shubto baaldiyo si dhulku gebi ahaanba u qooyo. Marka barafku dhalaalayo xilliga gu'ga, ciidda waa la buuxiyaa biyo kulul.
Sida ciidda, waxa kale oo suurtagal ah in lagu shubo dhoobo ballaariyey baaldiyada ama ku daboolaa qaybo yaryar oo kabo jir ah, si ay marwalba u helaan marin hawleedka nidaamka xididka yaanyada. Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad bilowdo gelinta:
lakabka koowaad ee qaabka haraaga cagaarka, cawska, haraaga cuntada;
lakabka labaad ee ciid oo lagu daro laba koob oo ash;
lakabka sare - ciidda beerta.
Waxaa lagama maarmaan ah in dhulka ku shub biyo badan oo diiran. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa habka lime jilicsan, taas oo horseedi doonta kuleyl xoog leh oo ku shub biyo karkaraya. Cimilada noocan oo kale ah ee dhulku waxay u oggolaanaysaa geedo beerto iyo goosashada si ka sii fiican iyo horeyba waqti hore.
Dhowr maalmood ka dib, waxaad u baahan tahay inaad ku beerato laba ama saddex dhirta hal baaldi leh mug ku saabsan toban litir.
Caawimaad! Bacriminta waxay noqon kartaa bacriminta bacrimin keli ah ka hor ubaxyada yaanyada. Waxaad sidoo kale ku dili kartaa nooca bacriminta, sida magnesium sulfate. Waa in la sameeyaa horraanta xilliga guga bilowga barafka barafka ama midigta godka marka la beerto, qiyaas ahaan hal qaado oo baaldi ah oo dhulka ah.
Sida loo koro rogayo: talaabo talaabo talaabo ah
Si loo yareeyo yaanyada sii kordhaya, waxaa habboon in la daboolo baaldiyada balaastigga ah oo miisaankeedu yahay 20 litir oo leh gacanta.
Qeybta baaldiga balaastigga ah waa in la qodaa si loo helo dalool ku saabsan 8 cm dhexroor iyo ku dhaji laba taageerooyin si loo sahlo in la gaaro hoose.
Dhammaan darbiyada taangiga waxaad u baahan tahay inaad soo saarto ciidda khaas ah oo leh Bacriminta. Qaybta hoose ee warshadda waa in si tartiib ah loogu soo jiiday daloolka, dibeddana waa in lagu hayaa jirida 4-5 cm, sidaas darteed beeraha ayaa xiraya.
Markaas waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah u buuxiso baaldi leh ciidda, iyo substrate waa in si habboon loo farsamo, rusheeyaa xididka geedka ilaa 5-6 cm.
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad ku darto lakabka soo socda ee compost.
Baaldi waa in mar kale lagu rusheeyaa ciidda si heerka heerka substrate uu hoos u dhaco dhowr mitir oo cabbir ah weelka weelka.
Ka dib markaa, baaldi waa in la gooyaa meesha uu si joogto ah u joogi doono.
Waxaa lagama maarmaan ah in ay ku shubaan substrate si aad u badan in biyaha uu ka soo baxo dhammaan godadka hoose ee baaldi. Haddii, ka dib markaad waraabiso, dhulka uu hoos u dhacay, markaa taasi waa caadi.
Baaldiyaha waxaa lagu dabooli karaa dabool, laakiin ma si adag u xiran si aysan uumi xad-dhaaf ahayn. Ka hor inta aadan waraabinin daboolka waa in laga saaraa.
Halkan waxaad ka arki kartaa sawirrada tamaandhada oo ku daboolanaya baaldiyada:
Sida loo daryeelo yaanyada?
Tamaandho ayaa loo baahan yahay in la quudiyo dhowr jeer inta lagu jiro xilliga xagaaga.
Waa inay noqotaa firfircooni koronto leh, laakiin heerkulku waa inuusan ka badan 30 darajo Celsius.
Waa lagama maarmaan in cawska laga saaro oo dhuuban dhirta waqtigeeda si looga fogaado adkaynta.
Waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo soo saaro waraabinta rootiga asaasiga ah ee tamaandhada, ha ku dhacin geedka laftiisa.
Dalladaha yaanyada yaryar waxay u baahan yihiin in lagu waraabiyo baaldi laftiisa, iyo dhirta horayba xoog leh waa in lagu shubo labiska sare iyo biyaha labadaba baaldi iyo baaldi baaldi (haddii baaldiyada lagu qodo).
Dharka ugu sareeya waa in la sameeyaa saddex jeer xilli.
Waa maxay natiijada laga filayo?
Marka koraan yaanyada baaldiyada, miraha waxay u bislaadaan dhowr toddobaad ka hor inta aan la isticmaalin habka caadiga ah. Tamaandhada noocyo kasta oo koray baaldiyaalku way koraan oo miisaamaan ilaa 1 kilo.
Miraha ha qallajin, jidhkoodu waa ka cufsan yahay kuwa ka soo baxa dhulka banaan ama koriyo. Marka la eego tirada miraha, yaanyadaasi waxay aad uga sareeyaan "walaalahooda" ee sariiro furan.
Khaladaadka caanka ah marka la soo dego
Khaladaadka Daryeelka Carrabku waxay ku kulmi karaan baaldiyaal aad u kulul marxalad sababtoo ah uumiga si deg-deg ah u socda qoyaanka. Oo marka koraan, bannaanka u badan u sameeyaan waraabinta aan habooneyn, taas oo horseedi karta dhimashada tamaandhooyinka baaldiyada. Tamaandhada baaldiyada waxay u baahan yihiin waraabin joogto ah oo joogto ah oo ka badan kuwa ku koray dhulka banaan.
Bacriminta nitrogen-ka ee xad-dhaafka ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in yaanyada waqtigooda la siiyo magnesium. Marka soonka magnesium la fuliyo magnesium sulfate quudinta (0.5%).
Ka hortagga cudurka insufficient. First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah si looga hortago dhacdooyinka cudurada ee yaanyada, iyo ma in lagu dhaqmo dhirta cudurada. Looma baahna inaad sugto calaamadaha dhaawaca iyo dhaawacyada kala duwan.
Qoto dheer ee beerto abuurka yaanyo. Marka laga hadlayo abuurka abuurka baaldiyada aad u qoto dheer, ma wada socon karaan.
Marka koraan yaanyada baaldiyada, bannaanka u hesho dhalidda sare. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu go'aansado inuu isticmaalo hababka dhaqanka ama teknoolajiyada cusub.
Haddii aad xiiseyneyso siyaabo kale oo loo kordhiyo geedo yaanyo, ka dibna waxaan ku talineynaa barashada siyaabaha noocan oo kale ah sida bacaha, laba xidid, iyadoon la soo qaadin, habka Shiinaha, dhalooyinka, daboolka, dheryaha, dheriga peat iyo foosto.
Fiidiyadan waxaad ka baran kartaa qaladaad macquul ah iyo xalinta dhibaatooyinka:
Sii siyaabo lagu hayo dabacasaha jiilaalka dhulka
Digaagga Qaadista Caanaha Blue: Arwana
Sorrel koraya: degitaanka iyo daryeel dheeraad ah
Dieffenbachia (Dieffenbachia lat.) Waa dhirta kuleylka ah, dhulkeeda waa kaymaha qoyan ee Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Dieffenbachia wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro laba mitir oo dherer ah, caleemuhu waa ballaaran yihiin, ballaaran yihiin, kala duwan. Iyada oo leh daryeel caafimaad oo wanaagsan, Dieffenbachia waxay jeceshahay quruxdeeda quruxda badan, ubaxku si fiican ayuu u horumaraa, marwalba caleemo cusub ayuu leeyahay. Read More
Cinjirka u adkaysta Svetlana: sharaxaada kala duwan iyo sawirrada
Noocyada beerista iyo noocyo dabeecad yaanyo Mazarin